IEksodus 5 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Emveni koko beza ooMoses noAron, bathi kuFaro, UtshoUtsho uYehova, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Bandulule abantu bam, bandenzele umthendeleko entlango.
2 Wathi uFarouFaro, Ngubani na uYehova, ukuba ndiphulaphule izwi lakhe, lokuba ndindulule uSirayeli? Andimazi uYehova, kananjalo andiyi kumndulula uSirayeli.
3 Bathi ke, UThixoUThixo wamaHebhere uhlangene nathinathi; makhe sihambe entlango uhambo lweentsuku ezintathu, sibingelele kuYehova UThixoUThixo wethu, hleze asiqwele ngendyikitya yokufa nangekrele.
4 Wathi ukumkani waseYiputa kubo, Yini na, nina MosesMoses noAron, ukuba nibakhulule abantu emisebenzini yabo? Yiyani emithwalweni yenu.
5 Wathi uFarouFaro, Yabonani, baninzi abantu belizwe ngoku, ke nina niyabaphumza emithwalweni yabo.
6 UFaroUFaro wabawisela umthethoumthetho abaphathiabaphathi nabaqhubi-kalukhuni babantu ngaloo mini, esithi,
7 Ize ningabi sabanika abantu umququumququ wokwenza izitena, njengokwangaphambili; mabaye ngokwabo, bazibuthele umququumququ;
10 Baphuma ke abaphathiabaphathi nabaqhubi-kalukhuni babantu, bathetha ebantwini bathi, UtshoUtsho uFarouFaro ukuthi, Andiyi kuninika mququ;
11 yiyani nina, nizithabathele umququumququ apho ningawufumana khona; kuba akuyi kuncitshiswa nto emsebenzini wenu.
14 Babethwa ke abaphathiabaphathi boonyana bakaSirayeli, ababemiswe phezu kwabo ngabaqhubi-kalukhuni babantu bakaFaro, kusithiwa, Kungathuba lini na, ukuba ningagqibi ukwenza izitena enizimiselweyo izolo nanamhla, njengokwangaphambili?
15 Baya abaphathiabaphathi boonyana bakaSirayeli, bakhala kuFaro, besithi, Yini na ukuba wenjenje kubakhonzi bakho?
19 Babona abaphathiabaphathi boonyana bakaSirayeli ukuba basebubini, kusithiwa nje, Aniyi kunciphisa nto eziteneni zenu, kwinto yemini ngangemini yayo.
21 Bathi kubo, UYehova makanikhangele, agwebe; ekubeni nilinukisile ivumbaivumba lethu phambi koFaro, naphambi kwabakhonzi bakhe, ukuba kubekwe ikrele lokusibulala esandleni sabo.
22 Wabuyela kuYehova uMoses, esithi, NkosiNkosi yam, yini na ukuba ubaphathe kakubi aba bantu? Yini na le nto uthume mna?
Exploring the Meaning of IEksodus 5